Inqubomgomo Yokuhwebelana Nokubuyisa
Izinto kufanele zibuyiswe zisesimweni sazo sangempela kanye nokupakisha, zingakapheli izinsuku eziyi-14 kusukela ngosuku owathola ngalo. Singanikela ngokushintshisana noma ukubuyiselwa imali okugcwele ngentengo oyikhokhile.
Le nqubomgomo yokubuyiselwa kwemali ayithinti amalungelo akho asemthethweni.
Uyacelwa uqaphele: Le nqubomgomo yokubuyisa nokuhwebelana ihlobene kuphela nokuthengwa kwe-inthanethi futhi ayisebenzi ekuthengeni okwenziwe esitolo.
Sincoma ukuthi ubuyisele izinto ngendlela enomshwalense nethandekayo, njengokulethwa okurekhodiwe kweRoyal Mail. Sicela ukhumbule ukuthola ubufakazi bokutholwa kweposi. Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi asikwazi ukubekwa icala nganoma yiziphi izinto ezilahleka eposini futhi ezingafinyeleli kithi. Uma usebenzisa iRoyal Mail Recorded noma i-Special Delivery ungabheka ukuthi silitholile yini iphasela lakho usebenzisa ithrekhi ye-Royal Mail ye-track.
Ukuze sikwazi ukucubungula ukubuyisa kwakho kahle, sicela uthumele inothi lokumboza kanye nephasela. Pease chaza ukuthi ngabe ufuna ukushintshaniswa noma ukubuyiselwa imali, isizathu sokubuyela, futhi khumbula ukufaka inombolo yakho ye-oda nemininingwane yokuxhumana yomuntu siqu ukuze sikwazi ukuxhumana uma kunezinkinga ezithile.
Lapho sithola umkhiqizo obuyiselwe kithi ukuze usibuyisele imali futhi sanelisekile ngesimo sawo nangesizathu sokubuyiselwa kwawo, sizocubungula imbuyiselo yakho yemali ephelele ekhokhelwe leyo nto sisebenzisa indlela efanayo yokukhokha ne-akhawunti esetshenziselwe ukuthenga ekuqaleni .
Uyacelwa ukuthi uqaphele: uma ubuyisela into enaniselana ngayo ukuze ubuyiselwe imali sinelungelo lokukhokhisa imali yokuphatha engu- £ 10 ukukhokhela izindleko zethu ezengeziwe zokuposa.
+ IMIBUZO YENQUBOMGOMO YOKUBUYELA
Ngabe kubalulekile ukugcwalisa ifomu lokubuyisa?
Sincoma ngokuqinile ukuthi ugcwalise ifomu lokubuyisa. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi ngabe into ibuyisiwe ngaphandle kwefomu lokubuyisa singaxhumana nawe ngocingo noma nge-imeyili ukuthola isizathu sokubuyiswa. Uma singezwa lutho oluvela kuwe zingakapheli izinsuku ezingama-30 sinelungelo lokuthi singakubuyisela leyo nto kuwe noma, uma into ifanelekile, sicubungule ukubuyiselwa imali kukhishwe imali yokuphatha eyi- £ 10.
Iyiphi insizakalo okufanele ngiyisebenzise ukubuyisa into?
Sincoma ukuthi ubuyisele izinto ngendlela enomshwalense futhi elandekayo, efana neRoyal Mail Recorded noma i-Special Delivery. Sicela ukhumbule ukuthola ubufakazi bokutholwa kweposi. Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi asikwazi ukubekwa icala nganoma yiziphi izinto ezilahleka eposini futhi ezingafinyeleli kithi. Uma usebenzisa iRoyal Mail Recorded noma i-Special Delivery ungabheka ukuthi silitholile yini iphasela lakho usebenzisa umkhondo we-Royal Mail we-track.
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi imbuyiselo yami icutshungulwe?
Sicela uvumele kuze kube yizinsuku zokusebenza eziyi-10-15 ngemuva kokutholwa kwazo zonke izimbuyiselo kanye nokuhwebelana okuzocutshungulwa. Uma ungakayitholi imbuyiselo yakho zingakapheli izinsuku eziyi-15 zokusebenza sitholile umkhiqizo wakho, sicela uxhumane nathi ngokuthumela i-imeyili ku-sales@sarmsstore.co.uk.
Ngingabuyisa into isikhathi esingakanani emva kokuthenga kwami?
Sicela uqinisekise ukuthi ubuyisa into yakho (izinto) zingakapheli izinsuku ezingama-30 uthengile.
Uma izinto zibuyiswa ngemuva kwalesi sikhathi sinelungelo lethu lokwenqaba ukubuyiselwa imali kepha singavuma ukunikela ngokushintshisana, kuncike entweni esesimweni esikahle. Izinto kufanele zibuyiswe zikusimo esifanayo naleso ebesithunyelwe ngaso.
Kuthiwani uma umkhiqizo wami ulimele noma unephutha?
Uma kwenzeka uthola umkhiqizo owonakele noma hhayi lowo oyi-odile ungawubuyisela kithi mahhala ukuze ushintshisane ngawo noma ubuyiselwe imali yonke kungakapheli izinsuku ezingama-30 uwutholile.
Kuthiwani uma ngifuna ukubuyisa into ethengwe kusayithi elibuyisa imali?
Izinto ezithengwe ngamawebhusayithi abuyisa imali zingabuyiselwa esikhathini esifanayo sezinsuku ezingama-30, kepha ukubuyiselwa kwemali ngeke kukhokhwe kulawa ma-oda.
Kuthiwani uma ngithola isipho samahhala ngokuthenga kwami?
Uma ufuna ukubuyisa into eza nesipho samahhala, kufanele ubuyisele isipho sakho samahhala naleyo nto.
+ Shintshanisa INQUBOMGOMO YEMIBUZO
Sizoyinikeza ngentokozo into yakho inqobo nje uma izobuyiselwa isesimweni esikahle futhi igculise imibandela yokubuyisa into njengoba ibekiwe kwinqubomgomo yethu yokubuyisa engenhla.
Ungayishintsha kanjani into
Landela inqubo efanayo echazwe kunqubomgomo yethu yokubuyisa. Sicela ugcwalise ifomu lokubuyisa bese usitshela ukuthi iyiphi into ongathanda ukuyishintshanisa kanye nemininingwane yokuxhumana efanele, uma sidinga ukuxhumana nawe.
Kwenzekani uma kunomehluko entengweni?
Uma kukhona enye imali ongayikhokha, sizokuthinta ukuze kukhokhwe.
Uma kunembuyiselo engaphelele ekhokhwayo lapho-ke lokhu kuzobuyiselwa ekhadini olisebenzisele okwenziwayo kwasekuqaleni okunikeza i-oda kubuyiselwa kithi zingakapheli izinsuku ezingama-30.
Ingabe ikhona imali yokuphatha?
Uma ushintshanisa ngento enenani eliphansi lapho-ke sinelungelo lokungeza imali yokuphatha engu- £ 10 entengweni yento ezongena esikhundleni. Uma kunjalo, sizoxhumana nawe ukukwazisa ngalokhu.